GoDaddy: Kusiya maBoobs Kuseri uye Kicking Ass | Martech Zone
GoDaddy: Kusiya maBoobs Kuseri uye Kicking Ass
Muvhuro, June 16, 2014 Chitatu, September 29, 2021 Douglas Karr
Ndakavenga GoDaddy. Ndakadaro zvechokwadi. Ini ndaisatenda kuti brand inogona kushandisa mamirioni emadhora kupenya cleavage uye ramba uchivaka bhizinesi rakawandisa. Yakanga iri mbama kumeso kune vashambadziri vakashanda nesimba kuchengetedza zvigadzirwa zvavo zvine chekuita, zvakajeka, zvine hunyanzvi uye zvinobatsira kune vateereri vavo. Yaive nzira iri nyore yekubuda… uye yaitaridzika kunge iri kushanda. Ini ndakaraira vese vatengi vangu kuti vashandise mamwe masevhisi uye vagare kure.
Nekufamba kwenguva, zvakadaro, zvakanyanya uye zvakanyanya zvevatengi vedu vakanga uchishandisa GoDaddy. Uye kwete chete ivo vaishandisa sevhisi, asi ivo vaindiudzawo ini rakakura sei basa revatengi kubva kukambani chaiko. Saka kune rimwe divi kwaive kambani yaive nehanya nevatengi vayo uye nemasevhisi airi kupa… uye kune rimwe racho kwaive nemushambadziro wechiratidzo uye wekushambadza waive wechidiki uye usina musoro.
Asi mafungu arikuchinja. Shamwari Christopher Carfi (uyo akabatana nechikwata cheGoDaddy) akandiisa mukutaurirana neMukuru wavo wePublic Relations, Susie Penner uye ini takazoita hurukuro inoshamisa naChief Communications Officer, Karen Tillman. Ndizvozvo ... a Susie uye Karen kutungamira kutaurirana kutsva! Karen haasi iye ega mukadzi muhutungamiriri hwevakuru. Blake Irving, CEO mutsva weGoDaddy akagadzwa mukupera kwegore ra2012 anga achichinja zvakawanda kukambani iri kufambisira mberi mhando… uye izvozvi GoDaddy iri kugadzirira yavo IPO.
Kushambadzira kweGoDaddy kuri kuchinja futi! Vakaburitsa ichi chiziviso cheSuperBowl icho chinopa rakasiyana mhando uye meseji kune veruzhinji, GoDaddy iri kubatsira vanhu kushandura zviroto zvavo kuita bhizinesi.
Nemabasa anoshamisa - kubva kuDomains, Kubata, Inotarisirwa WordPress Hosting, SSL zvitifiketi, Microsoft Office 365 kubata, Kuchengeta Online, Webhusaiti Inovaka, Ecommerce uye Local Search zvirongwa… GoDaddy zvachose ine maturusi anodhura anowanikwa kumabhizimusi madiki. Inopindirana nebasa ravo rakakura uye ndine chivimbo kuti vari kufamba munzira kwayo.
nepo uchira iri kumashure kwavo, hazvireve kuti GoDaddy yaenda zvinyoro nyoro! Buda Iyo GoDaddy Manifesto yeKick Ass:
Makorokoto, GoDaddy! Ndofunga urikutorova mbongoro.
Tags: Blake Irvingceo godaddyChristopher Carfigodaddykutanga chepachena chinopiwaipoKaren Tillmansusie pennerIyo GoDaddy Manifesto yeKick Ass
#Atomicchat: Mushandisi-Yakagadzirwa Zvemukati
Accent Accelerator: Gadzirisa Kutengesa uye Kushambadzira Zvishandiso